Ogige Paradaịs - WRSP
1916 (December 2) a mụrụ Howard Finster na Ala Ndagwurugwu Alabama.
1935 Finster lụrụ nwunye ya, bụ Pauline.
N'afọ 1940 Finster kere ubi ya mbụ "ogige" na ihe ndị mmadụ mepụtara dịka isiokwu ya.
1961 Finster kwagara Trion, Georgia ma zụta ala iji guzobe Ụlọ Ọrụ Ugbo Ala.
1965 Finster lara ezumike nká site na ozi ya iji tinye oge ya na Ngalaba Ugbo Ọhịa.
1975 Esquire Magazin bipụtara otu isiokwu nke na-edegharị aha ebe a na-akpọ Plant Farm Museum dị ka “Ogige Paradaịs.”
1976 Finster nwere ọhụụ iji kpaa ihe dị nsọ.
2001 Mgbe ahụhụ nwụsịrị ike ruo ọtụtụ afọ, Finster nwụrụ.
2011 Chattooga County zụrụ Paradise Gardens.
E tinye 2012 Paradise Gardens na National Register of Historic Places.
Akụkọ nke Paradise Gardens malitere na Reverend Howard Finster na ọhụụ pụrụ iche maka ozi Akwụkwọ Nsọ. Akụkọ Finster amalite mgbe ọ dị afọ atọ, mgbe o nwere ọhụụ Chineke mbụ ya. Na iri na isii, Finster nwere ọhụụ nke mere ka o kwusaa ozi ọma ma kwado nzukọ nzuko na Alabama, Georgia, na Tennessee. Mgbe afọ ole na ole dị ka onye nnọchianya, o kpebiri ịla ezumike nká na 1965 mgbe ọ gwara ọgbakọ ya na mgbede Sọnde ihe ozi ya bụ ụtụtụ ma ọ dịghị onye nwere ike icheta. N'ụzọ dabara adaba, akụkọ ahụ akwụsịghị n'ebe ahụ.
Na 1976, mgbe ọ dị afọ iri isii, Howard Finster nọ na-agba agba n'elu ịnyịnya ígwè na azụ ụlọ ya na Knox Street na Summerville, Georgia na-ese mkpịsị aka ya ihu ihu. "Ihe osise dị nsọ," ka ọ gwara ya. Finster zara ya na ya echeghị na ya nwere ike ịme ihe n'ihi na ọ bụghị ọkachamara. "Enweghị m agụmakwụkwọ na nke ahụ." Olu ahụ nọgidere na-ajụ ya, "Olee otu ị maara?" N'ikpeazụ, ọ kwụrụ ụgwọ dollar site na akpa ya, tinye ya n'elu otu plywood, wee malite ịse eserese nke George Washington. Ya mere, amalitere ozi ọma nke ndị obodo ya n'oge na-adịghị anya a na-akpọ Paradaịs Gardens, ihe nhụchi obi nke ndị ọhụụ okpukpe na-arụ site n'aka ya na ndị ọzọ na-ese ihe.
N'afọ iri abụọ na ise sochirinụ, Rev. Finster raara onwe ya nye maka mmepe nke ubi. Ogige Paradaịs ghọrọ ubi ọhịa Edenin nke eserese, ihe osise, na ụlọ ndị dị n'etiti osisi na okporo ụzọ apịtị, na-ata ahịhịa na vine. Ọ chọrọ ịchịkọta ihe nile dị n'ụwa, nke mere na Paradaịs ya ga-enwe ihe niile e kere eke, ọdịdị na omenala. Ogige Paradaịs ga-abụ ụlọ ọrụ nke ya. Tupu ya anwụọ, Finster gwusiri ọrụ 47,000 nke na-agbasa n'ime ubi niile ma mechaa kwadoro na ihe ngosi nka nile n'uwa dum.
Site na 1985, Rev. Finster rụcharala ọrụ 5,000 na Paradaịs Gardens wee malite ịmalite ihe ngosi maka ihe osise ya na REM's na The Talking Heads 'cover cover. Amụma ya toro na ya na ubi ndị a na-egosi na ihe nkiri ahụ Athens Georgia N'ime. Na 1983, Finster kọwaara Johnny Carson na mkpebi doro anya na ọ ga-ewu ubi n'ubi "Tonight Show." Ọ sịrị, "M wuru ogige ahụ n'ihi na enwere m mmetụta na m ga-eme ya dịka ị ga-adụ mgbe ị nọ "N'ụzọ dị mwute, mgbe ọ nwụsịrị, ndị nketa anaghị enwe ọhụụ doro anya.
Howard Finster nwụrụ na 2001 site na nsogbu ndị metụtara ọrịa shuga. E nyere ndị ezinụlọ dị iche iche aka nke Ogige Paradaịs ma mesịa gaa na Alabama. N'oge a, a na-eleghara ogige ndị ahụ anya.
Otú ọ dị, Otú ọ dị, Chattooga County, bụ onye bi na Jọdan Poole, na-edu ndú ná nkwụghachi ego nke Paradise Gardens. Ọ nwetara Georgia Trust maka Historic Preservation si tinye Paradise Gardens na 2010 ndepụta nke Ebe na Peril, nke mbụ n'ime usoro afọ abụọ ịzụta ihe onwunwe maka mweghachi. Na 2010, ngalaba mpaghara mpaghara Appalachian nyere onyinye nye Chattooga County iji gbalịa ịkwalite Paradise Gardens dị ka ebe nkiri njem nleta. Ekem, ke December nke 2011, Chattooga County zụtara Paradise Gardens ma malite usoro ogologo nke iweghachi ọrụ nkà a na-eleghara anya. N'April nke 2012, e tinyere Ogige Paradaịs na National Register of Historic Places. Na May nke 2012, e megharịrị ubi ndị ahụ, na June nke 2012, ọ ghọrọ onye natara $ 445,000 site na ArtPlace iji nọgide na-eweghachi.
Ọ bụ ezie na ọ siri ike ịhapụ nkwenye ndị dị n'ime Paradise Gardens na Rev. Finster si na nkà ha na-egosipụta, e nwere ihe ole na ole a ghaghị igosi. Ọtụtụ n'ime ihe osise na nkuzi Akwụkwọ Nsọ na-ekpughe ụdị oku hell, ọkụ, na brimstone. Ikekwe nke a bụ mpaghara na Paradaịs Gardens, ma ọ bụghị ihe na - akọwa ọrụ ndị na - eme ihe banyere Finster. Ihe dọtara ndị ọbịa, ndị na-eto eto na-eto eto, na ọbụna REM na Rev. Finster bụ ezigbo ịhụnanya nke mmadụ niile na nkà ya. Ọtụtụ mgbe a na-eseghachi ya na eserese na Paradaịs Paradise bụ "Ọ BỤGHỊ MGBE NDỊ M BỤGHỊ M HERE." N'ebe ndị ọzọ, "Welcome to Paradise Gardens. Chineke bụ ịhụnanya. "
Ọzọkwa, Ogige Paradaịs bụ ebe okike, okike, na ndụ. Na omenala Akwụkwọ Nsọ, Paradaịs ma ọ bụ Ogige Iden bụ ọla nke ihe okike mbụ nke Chineke. Ọ bụ ụlọ mbụ mmadụ, ebe Chineke kere ha, nwoke na nwanyị, n'onyinyo Chineke. Na isi nke mbu nke Jenesis, anyi guru ya na n'ubochi nke isii, dika njedebe nke oru nile nke okike, Chineke kere mmadu n'onyinyo Chineke. Edi nso ke ndidọhọ ke ẹkebot owo ke mbiet Abasi? Otutu ihe nye otutu ndi mmadu, ihe doro anya, ma ihe ayi matara site na nke a na Jenesis 1 bu na Chineke, karia ihe nile, kere ihe n'inye ndu ndu na ime uwa. Na ìhè a, ịbụ ihe okike, iji mepụta, ga-adị n'onyinyo nke Chineke. Inwe n'onyinyo nke Chineke bu ime ihe dika onye okike. Ihe okike n'onwe ya bu onyinyo Chineke. Ụdị mmadụ dịka Chineke, dị ka William Blake tinyere ya. Imago dei; arụ ọrụ ahụ.
A chụpụrụ Adam na Ọbụna n'ogige ahụ, Chineke wee soro ha gaa. Mana ebe a, anyi nwere nloghachi na ubi anyi na nloghachi nke Ogige dika ebe udo na Chineke. Creativity ghọọ ụzọ mgbapụta na mweghachi. Ogige Paradaịs bụ ebe mgbapụta. Ọ bụ ọrụ nke ihe ndị e kere eke na-ekwupụta n'onwe ya, site n'ọrụ ahụ, iji weghachite ụmụ mmadu ka ọ bụrụ onyinyo ya. Ọ bụ nloghachi na Jenesis, nloghachi ịbụ "na mmalite."
Ihe ndi ozo edere na onu ogugu nke ndi Baibul na ozizi di iche iche di na Paradise Gardens. Ọ bụ ezie na ọnọdụ nkà mmụta sayensị na-esiri ike ịchọta, e nwere ọtụtụ isiokwu ndị metụtara ihe ndị okike. Na-esote otu ụzọ, gbara ya gburugburu na klas efu, ite mmanụ yima na ụrọ ndị ọzọ, bụ akpụkpọ ụkwụ na-acha ọcha, dịka Ronald McDonald na-eyi. Ọ dị ihe dị ka mita atọ n'ogologo na ụkwụ isii n'ogologo, ama edekwara amaokwu sitere na akwụkwọ ozi Pọl degaara ndị Rom na mkpịsị ụkwụ ya: "Lee ka ụkwụ nke ndị na-agbasa ozioma nke udo dị mma." Ọ bụghị akpụkpọ ụkwụ mara mma nke nwere ike ime gosiputa amaokwu a. Ọtụtụ n'ime anyị nwere ike iche ihe dị ka Hamis 'nku nku dị ka ọ na-egosi na FTD ifuru nnyefe mgbasa ozi. Ma nkwekọrịta nke nnukwu akpụkpọ ụkwụ ochie na okwu ndị na-akọwa ọmarịcha ụkwụ na-agbasa ozioma nke udo bụ ihe na-agba ume, na-eme ka nlebara anya na ederede ya, meghee ya maka ntụgharị uche na ụzọ ọhụrụ.
Finster hụrụ onwe ya dịka Noa nke oge a. Ọ hụrụ na nkà ya bụ ụzọ isi kwusaa na ikpe ahụ na-abịa, na hel dị adị, nakwa na anyị niile dị njikere ịdị njikere. Otu eserese bụ ihe pụrụ iche. Ọ bụ ihe nkpuchi nke na-akọwa "Ekwensu na nwunye ya." N'akụkụ ahụ, Ekwensu na nwanyị ọzọ (Eve?), Gba ọtọ ma buru uwe na-acha uhie uhie na nke acha anụnụ anụnụ, na-eme ka ibe ha na-eme ka onye ọ bụla na-agwọta ibe ya mgbe agwọ na - ata ma ọ bụ na - n'azụ. N'ebe ọdịda, otu elekere anọ a na-akpọ "CHILD DE DEVIL" na-eche na. N'okpuru ihe abụọ a bụ ozi ịdọ aka ná ntị ederede megide ihe ọjọọ nke ịkwa iko:
Ọ BỤRỤ na ị na-eme ka mmekọrịta gị na Chineke bụrụ ihe efu! KWUGHỊ ỤBỤRỤ ỤLỌ BỤ N'ỤLỌ BỤ N'ỤLỌ BỤ N'ỤLỌ NỌKWỤKWỌ N'ỤLỌ NWA KWESỊRỊ N'ỤLỌ NWA, Ọ BỤ NNE Ọ BỤ NWA, ONYE ANYỊ NWERE, NWERE NNE Ya. Nke a bụ agbamakwụkwọ iwu. SEX Ọ PỤRỤ NA-EBE EBE EBE EBE EBE ECHI. ỌTỤTỤ ỌTỤTỤ UGBU Ị PỤRỤ NTỤKWU NDỊ GA-EBE EKPERE. KWA.
Ozi ndị ọzọ nke ikpe ikpe maka mmehie na-abịanụ dị iche iche na ubi. N'ebe ọzọ ma n'ime ime ụlọ ahụ ọtụtụ ọrụ nkà, ụfọdụ nke Rev. Finster na-akpọ ma ọtụtụ ndị enyi. N'elu ogige Paradise Gardens, ọrụ nke ya jikọtara ya na okwu nke ndị ọzọ. Ọ bụ mgbalị obodo, n'ezie ihe ngosipụta nke obodo, ebe e kere eke maka ọtụtụ, ma eleghị anya n'ihi na ọ bụla. N'ụzọ doro anya, nkà mmụta okpukpe nke ụka a na-agụnye usoro ihe ọmụmụ nke siri ike na nkwenkwe "ndị nchụàjà nile nke ndị kwere ekwe." Ọ bụ ezie na e nwere ọtụtụ ihe gbasara Akwụkwọ Nsọ na Paradaịs Gardens na Finster na-arụ ọrụ n'ebe ahụ, ha nile bụ maka ile ọbịa na ịhụnanya nke mmadụ niile: "Welcome to Paradise Gardens. Chineke bụ ịhụnanya. "
Ogige Paradise Gardster nke Paradise Finster bụ mgbalị dị mkpa, dị ka obere nwa ya si kwuo, "mee ka ndị mmadụ dịrị n'otu na Chineke. Nna m wuru ubi dị ka ndị amụma nọ n'Agba Ochie wuo ụlọ nsọ ha. Ọ dị ka ụlọ nsọ ya nke Chineke. Ọ chọrọ ka o jupụta akụkụ Akwụkwọ Nsọ na ihe osise ya. Nzube ya dum, ihe niile o mere bụ ịgosi ndị mmadụ na Chineke. "Ọ bụ ezie na ubi ndị a na-ejikọtaghị ya na Rev. Finster, ha adịghị eche banyere ya. Ogige Paradaịs bụ maka ọrụ nke obodo, òtù okpukpe dị iche iche, ma ọ bụ obodo nka. Ogige Paradaịs bụ ụka na Rev. Finster dị ka onye pastọ guzobere ya. Na oku nke ụka a bu imeputa.
Ogige Paradaịs bụ ebe generativity, ike okike na ndụ. N'ime ubi, nnukwu nnukwu ụlọ na-enye ogo nhazi. Nke mbụ bụ Ụlọ Nzukọ Ọmarịcha a ma ama, ụlọ elu atọ nke atọ jupụtara na nsị nke na-eru ihe dị ka ụkwụ iri ise n'ogologo. Ọ na-ele ihe dịka obe n'etiti otu agbamakwụkwọ agbamakwụkwọ na Ụlọ Elu Bebel. A na-eji nlezianya kpochapụ osisi ọ bụla dị na ya na oghere nke windo ndị dị na windo na-egbu maramara. Okposụkedi emi ẹkewetde ke n̄kan̄ eke ikpọkidem, enye edi utom nte utom emi ọfọnde ke ofụri In̄wan̄. Ọ bụ ụlọ nsọ, nke mba ụwa nke ụwa a paradaịs. Ulo Ogige ahụ ejirila ọtụtụ puku agbamakwụkwọ na ndị ụlọ akwụkwọ kwadoro. Mgbe ọnwụ Finster nwụsịrị, e mechibidoro ndị bịara nleta ma na-emegheghachi ogige Paradise Gardens na May nke 2012, Isi Ụlọ Nzukọ ahụ meghere ọzọ n'ihu ọha.
Isi ihe nke abụọ na-enye ntụziaka na ubi bụ ogologo oge, kpuchie ákwà mgbatị na-egbutu ma ọ bụ na-erughị na diagonally gafee ihe onwunwe ahụ. Ewubere na 1990s nke mbụ, ala ya dị ihe dị ka mita itoolu n'elu ala, tinye ya n'elu osisi ndị dị ka ọnụ ụzọ ámá nke osimiri na-agbaba n'ọhịa. N'ọnọdụ oge, a na-ebipụ oghere ndị dị ka windo windo a na-edepụta akwụkwọ n'ime mgbidi mpụta. N'okpuru ala ala ahụ, e nwere igbe igbe enyo nke na-egosi na ịnakọta ihe osise na ihe ndị ọzọ na-egosipụta ma ọ bụ chekwaa.
Gbasaa n'ubi nile bu ihe omimi nke amaokwu Baibul, ihe omumu nke akwukwo nso, na ihe ndi ozo ndi ozo na-eme ka nkwusi ike na ikwuputa nkwenkwe okpukpe nke Finster. Rev. Finster na-akpọ onwe ya "Minista Minista nke Mba Ndị Na-ahụ Maka Egwuregwu Ụka." N'ihi ya, o kwenyere na ọ bụ ọrụ ya ikwusa ọhụụ amụma ya. Nile gafee Ogige Paradaịs a na-ese mbadamba nkume ndị a na-atụgharị na mgbidi, na-adabere na osisi na nkume, na n'ebe ndị ọzọ. Ụfọdụ na-ese onyinyo ndị a na-ese iji yie ndị mmụọ ozi na ndị nsọ ụwa, dị ka eriri na-adabaghị adaba nke Henry Ford kpụga n'èzí nke ụzọ awara elu, nke e dere na ihe ndị ọzọ, "HENRY FORD. AJỤ. NKWA-CHARIOT - NKWUKWU NDỊ ANYỊ NA-EKWU ỤWA NA NDỊ ỤWA, "bụ nkọwa banyere ọhụụ Ezikiel banyere cherubim. N'ụzọ doro anya, Ford aghọwo ụgbọala maka Akwụkwọ Nsọ.
Linda, bụ onye rụrụ ọrụ ngosi ihe nkiri ma rere ụlọ ahịa na Paradise Gardens, kwuru na Finster ga-etinye "akụkụ Akwụkwọ Nsọ na ozi Bible na n'ihu na azụ nke nkà ya. Ọ maara na ndị mmadụ nwere mmasị na nkà ya ma jiri ya mee ka okwu ya pụta. "Ọrụ Finster bụ ọkara ọ na-eji kwusaa nkwenkwe okpukpe banyere" ndị nile. "
Ihe edere na profaịlụ a na-emegharị ma gbanwee site na Timothy Beal, Ụzọ Okpukpe: N'ịchọ nke dị nsọ, Profane, na Ụdị Okwukwe.
Beal, Timoti. 2005. Ụzọ Okpukpe: N'ịchọ nke dị nsọ, Profane, na Ụdị Okwukwe. Boston: Beacon Press.